Home » Vaovao momba ny dia lavitra mahandro sakafo » Ny praiminisitra Tonga dia nanentana ny mpitondra ny Nosy Pasifika hiady amin'ny fatiantoka mihoampampana
Ny Pacific dia manana ny tahan'ny matavy indrindra eto an-tany ary mila mihena ny lohan'ny fanjakana mba hanome ohatra tsara ho an'ny mponina.
Ny praiminisitra Tonga Akilisi Pohiva dia niantso ny filoham-pirenena namany ao amin'ny Pasifika mba hanenjana mba hanome ohatra tsara ho an'ireo mponina lohan'ny faritra. Nilaza mihitsy aza izy ireo fa afaka manangana fifaninanana fihenan-danja.
Ny Pasifika dia fonenan'ny taham-pahavoazana avo indrindra manerantany sy aretina tsy mifindra, ary Pohliva dia nanolotra ny hahatonga ny fifaninanana ho ampahany amin'ny Pacific Islands Forum, fivoriana fanao isan-taona an'ny fanjakana tsy miankina ao amin'ny Oseana Pasifika. Ny mpitarika Tonga dia nanolotra hevitra fa ny mpitondra tsirairay dia lanja amin'ny fivoriana amin'ity taona ity alohan'ny hiverenany amin'ny taona manaraka mba handanjalanja hafa.
"Tsy ny hoe iza no very kilao indrindra, fa raha te-hanala ny lanjany ianao dia tsy maintsy mihinana maivana ary hanana izany toe-tsaina salama izany", hoy i Pohiva, mpampianatra sekoly taloha, nilaza tamin'ny The Samoa Observer. "Raha vantany vao mizatra amin'izany toe-tsaina izany ny mpitondra dia tapa-kevitra ny hitondra ny olony amin'ny lafiny iray ihany izy ireo ary hiala eo."
Raha ny filazan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena Momba ny Fahasalamana dia ankizy sy tanora iray amin'ny firenena 10 Pasifika iray no kilasiana ho matavy, raha ny fanadihadiana sasany kosa dia 40 ka hatramin'ny 70 isan-jaton'ny zaza matavy dia ho tonga olon-dehibe matavy. Nilaza ny OMS fa ny fihanaky ny matavy loatra ao amin'ny faritra dia hatramin'ny fanoloana ireo sakafo nentim-paharazana amin'ny sakafo nafarana sy voahodina.
Any Nauru, 61 isan-jaton'ny olon-dehibe no matavy loatra. Any amin'ny Nosy Cook dia 56 isan-jato ny isa. Amin'ny ankapobeny, manodidina ny 12 isan-jaton'ny olon-dehibe no sokajiana ho matavy loatra. Ny habetsaky ny hatavezina ao amin'ny faritra dia nahatonga ny fiandrasana fiainana raha toa ka nitombo ny tranga diabeta sy aretim-po.
Naneho ny alahelony i Pohiva noho ny fiatraikany ratsy teo amin'ireo fandraisana andraikitra manandrana mamaha ny olana any Pasifika ary nilaza izy fa manantena ny fifaninanana famoahana lanja ho ohatra tsara ho an'ny olona hanaraka.
"Ny aretina [tahan'ny] tsy mitapoka sy ny hatavezin'ny zaza dia misy ifandraisany amin'ny fahazaran-tsakafo sy ny fomba fiainantsika ary olana sarotra izany raha ny momba ny olona any Pasifika," hoy izy.
"Ary miaraka amin'ireo mpitondra nosy Pasifika, mifankahita sy miresaka ary miresaka momba an'ity olana ity izahay, kanefa ny fandraisana andraikitra amin'ity olana ity dia tsy misy fiantraikany… Nanohana an'io olana io ihany izahay nandritra ny taona maro saingy toa tsy mandeha izany."
Firy amin'ireo mpizahatany no manome tombana ny diany mankany Hawaii ho tsara?
34 minitra lasa izay